Warmly Welcome: June 2008
Real Age သည် ကျန်းမာရေး အထူးပြု အွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုသူများ အတွက် တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေး သတင်းအချက်အလက်များနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် အသုံးပြုနိုင် မည့် tool များ ပါဝင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ tool များသည် ကျန်းမာရေး လိုက်စားသော သူများကို ပိုမိုငယ်ရွယ် နုပျိုလာမည်ဟု ယုံကြည်ချက်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် များစွာ အထောက်အကူ ပေးနိုင် ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ Real Age သည် ရေဒီယိုနှင့် တီဗွီပရိုဂရမ်များစွာတွင်လည်း တစ်ကိုယ်ရည် ကျန်းမာရေး ပညာပေး အစီအစဉ်များ တင်ဆက်လျက်ရှိပါတယ်။ အထူး အသုံးတည့်သော feature တစ်ခုမှာ Real Age test ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများစွာ ပါဝင်ပြီး အဆိုပါ မေးခွန်း အားလုံး ဖြေဆိုပြီးပါက သင့်၏ ဇီဝကမ္မ အသက်နှင့် ပြက္ခဒိန်အသက်ကို နှိုင်းယှဉ်၍ တွက်ချက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး မလိုက်စားသူများသည် မူရင်းအသက်ထက် မည်မျှ အိုစာနေမည်ဖြစ်ကြောင်း အဖြေထွက်လာမယ် ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် Interactive Health Assessment ပေါင်း ၄၀ ကျော်ပါဝင်ပြီး Quiz များနှင့် အခြား tool များကို အသုံးပြုကာ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနှင့် ရောဂါဖြစ်နိုင်မှု အလားအလာ များ နှင့် ထိုအလားအလာကို မည်သို့ လျော့ချနိုင်ကြောင်း အကြံပြုချက်များ ပေါ်ထွက်လာမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေရာတွင် လွန်စွာ အသုံးတည့်သည့် Smart Search တစ်ခုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Posted by Welcome at 8:59 AM
စာကြည့်တိုက် ပိုင်ရှင် စတီဗင်ကိုးလ် က ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်လောက်တွင် စတင်သော ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အကြောင်းအရာ အလိုက် သီးသန့်လေ့လာ လိုသူများနှင့် သာမန်စာဖတ် ပရိသတ်များ အတွက်ပါ စာအုပ် အမျိုးအစားစုံလင်စွာ စုဆောင်းထားရှိ ပါတယ်။ စာအုပ်ရေ တစ်သိန်းကျော်ကို အခမဲ့ တစ်အုပ်လုံး download လုပ်ယူနိုင်တာက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့စာအုပ် များကို မူလပေါက်ဈေးထက် များစွာ သက်သာတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းစီ အတွက် အညွှန်းများ၊ ဝေဖန်ချက် များကိုလည်း စုဆောင်းပေးထား တဲ့အပြင် ၀က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ မူပိုင်စာအုပ် ဝေဖန်ချက်များလည်း ပါရှီပါတယ်။ ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ စာအုပ်တိုက်များနှင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသူ များ၊ စာရေးဆရာ များသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်းရှိ စာအုပ် အားလုံး အတွက် နမူနာ စာမျက်နှာများနှင့် အညွှန်းများ အားလုံးကို အခကြေးငွေ ပေးစရာမလိုဘဲ မည်သူ မဆို အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း ကုန်ကျစရိတ် သက်သာတဲ့ ကြော်ငြာမျက်နှာစာ တစ်ခုအဖြစ် ယူဆနိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 8:56 AM
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စားသောက်နေကြတဲ့ အစားအစာတွေဟာ အသက်ရှင် ရပ်တည်နေနိုင် ကြဖို့အတွက် စားနေကြ ရတာပါ ဆိုတဲ့ အသိတရားဟာ ဟောင်းနွမ်းသွားပါပြီ။ သည်ကနေ့ခေတ် မှာတော့ နေ့စဉ် စားသောက်နေ ကြတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ကျနပြေပြစ်ဖို့၊ အရွယ်တင် နုပျိုပြီး သွယ်လျလှပဖို့၊ ပုံမှန် သွားလာ လှုပ်ရှား ပေ့ါပါး သွတ်လက်စေဖို့ … စတဲ့ ကျန်းမာရေး အသိတရားတွေနဲ့ အညီ ကျန်းမာရေးကို မျှော်ကိုး အားထား ချက်တွေနဲ့အတူ စားသောက်နေကြတဲ့ ခေတ် ဖြစ်နေပါပြီ
အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာဆိုတဲ့ မြန်မာ့ မိရိုးဖလာ အယူအဆကို ပိုမို နားလည်သဘောပေါက်လာကြပြီး အစားအသောက်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး စီစဉ် စားသောက်တတ်ကြတဲ့ အကျင့်လည်း စွဲမြဲ ခိုင်မာလာနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်ကနေ့ ခေတ်ကာလဟာ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးမှု တွေကျယ်ပြန့် ထွန်းကားနေသလို ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝလာကြတာနဲ့အမျှ အစားအသောက်ကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားရပုံအကြောင်း၊ ဆီးချို သွေးချိုရောဂါ အတွက် အစားအသောက် နဲ့ ထိန်းကွပ်ပြီး ပြုပြင် စီစဉ်စားသောက် တတ်ရမယ့်အကြောင်း တွေကို သိလာနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစားအသောက်ရဲ့ စုစည်းမှု မမှန်ကန်မှုကြောင့် ခန္ဓာတွင်း ဓာတ်တည့်မှု သဘောတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု ခံရခြင်းတွေကိုလည်း သိလာကြရပါပြီ။
အစားအစာဟာ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို ထိန်းထားပေးနိုင် ပါတယ်။ အစားအစာဟာ မှန်ကန်စွာ စားသောက်တတ် ခဲ့ရင် ဆေးဝါးထက် အစွမ်းထက်ပြီး ရေရှည် အစွမ်းသတ္တိ ထက်မြက်ပြီး ထိရောက်တဲ့ အာနိသင် ကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်ကို ဆင်ခြင် တိုင်းထွာစားသောက် တတ်ပါမှ ကျန်းမာ ရွှင်လန်းတဲ့ ဘ၀ကို ရယူနိုင်မယ်။ ရောဂါ ဘယကို ရှောင်ကွင်းနိုင်မယ်လို့ သိလာကြတာနဲ့အတူ နေ့စဉ်စားသောက်မှုထဲ မပါမဖြစ် ထည့်သွင်း စားသောက် ဖို့ အစားအစာလေး တချို့ကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဖော်ပြမယ့် အစားအစာဟာ သင့် မီးဖိုချောင်မှာ အဆင်သင့်ရှိပြီး သားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အကျိုးအမြတ် မတန်တဆ ရနိုင်လောက်တဲ့ အစားအစာ တွေကိုညွှန်း ချင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူမှာ ပါတဲ့ ဆာလဖာဓာတ်ပေါင်းကြောင့် အရသာ စူးရှရှနဲ့ အနံ့ပြင်းပြင်း ရှိနေပေမယ့် ကျန်းမာရေး အတွက် အထူးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူမှာ ပါတဲ့ ဆာလဖာဓာတ်ပေါင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်က မလိုလားအပ်တဲ့ အဆီတွေကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ လျှော့ချပေး နိုင်စွမ်းပါတယ်။ သွေးတိုးနှုန်း မြင့်မားနေတာကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ သွေးကြောထဲ သွေးခဲလေးတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ သွေးကြောကျဉ်း ပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်အောင် ကြက်သွန်ဖြူက စွမ်းဆောင်ပါတယ်။ သွေးတိုး ဝေဒနာရှင်တွေ အထူး မှီဝဲသင့်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကို စားမယ်ဆိုရင် သူ့ချည်းအတိုင်း စားရင် ပိုပြီး အာနိသင် ရှိပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူဟာ အပူဓာတ်နဲ့ ထိတွေ့ရင် သူ့အာနိသင်ဟာ လျော့ပါးသွား နိုင်တဲ့အတွက် ဟင်းချက်တဲ့အခါ ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံမခွာဘဲ ထည့်ချက်တော့မှ အာနိသင် လျော့မသွားဘူးလို့ လည်းသိရပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ကြက်သွန်ဖြူ ဥကြီးနှစ်လုံးကို တစ်ပတ်မှာ လေးကြိမ်မှ ငါးကြိမ်အထိ စားပေးသင့် ပါတယ်။ အသုပ်စုံ သုပ်စားရင်လည်း ကြက်သွန်ဖြူကို ပါးပါးလှီးပြီး နိုင်နိုင်စားပေးပါ။ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ဆီတကာ့ဆီတွေထဲမှာ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ဆီက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်ဆီက ရတဲ့ဆီက အဆိုးဆုံးပါပဲ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီထဲမှာ သံလွင်ဆီက သာလွန် ကောင်းမွန်ပြန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ သံလွင်ဆီကို အသုံးအလွန်နည်းပြီး သုံးရကောင်းမှန်းလည်း သိပ်မသိကြဘူး။ သံလွင်ဆီဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆီ ကိုလက်စထရော ကို လျှော့ချပေးတဲ့နေရာမှာ တခြားအရာတွေထက် အာနိသင် ပိုများပါတယ်။ သံလွင်ဆီမှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်း အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ကြွယ်ဝ ပါတယ်။
မြန်မာတွေအဖို့ကတော့ သံလွင်ဆီကို စားဆီအဖြစ် အလေ့အကျင့် ရဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သုံးဖြစ်အောင် က ချက်ပြုတ်ကြတဲ့အခါ ထည့်သုံးတဲ့ ထောပတ်နဲ့ မာဂျရင်းအစား သံလွင်ဆီကို သုံးစေချင်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးကို အနီရောင် ဖြစ်စေတဲ့ လိုင်ကိုပင်းန် (Lycopene) လို့ခေါ်တဲ့ ကယ်ရိုတီနွိုက် ရောက်ခြည်ဆဲလ် ဟာ ငရုတ်သီးတွေကိုလည်း အနီတောင့် တွေ ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ ကယ်ရိုတီနွိုက် ရောင်ခြည်ဆဲလ်ရဲ့ အာနိသင်ကြောင့် ခရမ်းချဉ်သီးဟာ အနီရောင်ဖြစ်ရတယ်။ ဒီသဘာဝဟာ ခန္ဓာဝဖြိုးမှုကို ဟန့်တားပေးပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ ခါးတုတ်လာမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ စိတ်ညစ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုကို ပြေပျောက်စေပြီး စိတ်ရွှင်လန်း တက်ကြွလာစေပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးကို ဒီအတိုင်း မစားနိုင်ရင် ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ဖ် အဖြစ် စားသုံး ပေးနိုင်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးကို နီစေတဲ့ Lycopene ဓာတ်ဟာ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကိုလည်း ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ Lycopene ဓာတ်ဟာ ခရမ်းချဉ်သီးကို အချဉ်ရည် (ဆော့ဖ်)အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါ အာနိသင် ငါးဆလောက် ပြင်းလာကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆေးအဖြစ် သောက်သုံးချင်ရင် တစ်ပတ်ကို ခရမ်းချဉ်သီးရေ နှစ်ဖန်ခွက် (၅၀၀ မီလီလီတာ) သောက်ရပါမယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ထမင်းစားတဲ့အခါ ခရမ်းချဉ်သီးကို အသုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တို့စရာ အဖြစ်လည်းကောင်း စားသောက်ပေးခြင်းက မြန်မာ့စားသောက်မှု သဘာဝနဲ့ ပိုမိုနီးစပ်မှုရှိပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်း ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီး ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ပြုံးပျော် ရွှင်လန်းနိုင်ပါစေ….။
Posted by Welcome at 6:23 PM
Science သည် သိပ္ပံပညာရပ်အကြောင်း ရေးသားထားသော မဂ္ဂဇင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီး တစ်ခုဖြစ်ပြီး စာအုပ် အဖြစ် သာမက Online version အဖြစ်လည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမဂ္ဂဇင်းမှာ ဆေးပညာရပ် ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ တွေကို အများနားလည်အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးသားထားပြီး MP3 ပလေယာ များ အတွက်လည်း အသံထွက် စာအုပ်အဖြစ် နားထောင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Podcast ဖိုင်များကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားတယ်။ ဒါ့အပြင် သိပ္ပံနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ အကြောင်းကိုလည်း ကဏ္ဍ တစ်ခုအဖြစ် ထည့်ပေး ထားပါတယ်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ သိပ္ပံသတင်အချက်အလက်တွေ လေ့လာလို သူများအတွက် မဖြစ် မနေကြည့်ရှုကြရမယ့် အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းဖြစ်ပြီး ထုတ်ဝေပြီးသား စာအုပ်များကိုလည်း အွန်လိုင်းအတွင်း မှတ်တမ်း (Archive) အဖြစ် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဗဟုသုတရှာမှီးလိုသူ မည်သူမဆို လေ့လာ ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။
နေသာတဲ့နံနက်ခင်းတစ်ခုတွင် လူတစ်ယောက်သည် ကျဉ်းမြောင်းသော တံတားတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းနေခိုက်၊ သူ့အောက်ရှိ မြစ်ကမ်းပါးဘေး သစ်ရိပ်အောက်တွင် ငါးမျှားနေသော တံငါသည်တစ်ယောက်ကို မြင်သည်။ မြစ်မှာ ရေနက်ပြီး ညင်သာစွာ စီးဆင်နေသည်။ ထိုလူသည် တံတားပေါ်ရပ်၍ တံငါသည်ကို စောင့်ကြည့် နေခဲ့သည်။
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် တံငါသည်သည် သူချထားသော ငါးမျှားကြိုးကို ဆွဲယူလေသည်။ ငါးမျှားကြိုး အဆုံးတွင် အလွန်ကြီးသော ငါးတစ်ကောင်ပါလာသည်။
တံငါသည်သည် ငါးကို ငါးမျှားချိတ်မှဖြုတ်၍ ရေထဲသို့ ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။ နောက်ထပ်မိနစ် အနည်းငယ် အကြာတွင် နောက်ထပ် ငါးကြီးတစ်ကောင် ရပြန်သည်။ တံငါသည်သည် ထိုငါးကြီးကိုလည်း မြစ်ထဲသို့ ပြန်လွှတ် လိုက်ပြန်သည်။ တတိယအကြိမ်တွင်မူ ငါးအသေးတစ်ကောင် ဖမ်းမိသည်။ ထိုငါးကို သူ့တောင်းထဲ ထည့်ပြီး နောက် အိမ်ပြန်ရန် ပြင်ဆင်တော့သည်။ တံတားပေါ်မှ လူသည် အလွန်အံ့အားသင့်သွားသဖြင့် တံငါသည်အား မေးသည်။
“ ခင်ဗျားဘာကြောင့် ကြီးမားပြီး လှပတဲ့ ငါးကြီးတွေကို ရေထဲ ပြန်လွှတ်ပြီး၊ ငါးသေးသေးကိုမှ ယူတာလဲ ”
တံငါသည်က မော့ကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တာက..
“ ဒယ်အိုးက သေးသေးလေးမို့ပါဗျာ ” တဲ့
အင်တာနက် ကွန်ရက်ဝက်ဘ် ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာ့ဒေသပေါင်းစုံမှ အရောင်အသွေး၊ အသက်အရွယ်ပေါင်းစုံ ရှိသော လူများကို Chatroom, Message board နဲ့ Online Venue တို့မှာ တွေ့ဆုံ ရင်းနှီးစေသော နည်းပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပြောတဲ့ Meetup မှာတော့ အဖွဲ့ဝင်လူအချင်းချင်း တွေ့ဆုံမှုကို ပြင်ပကမ္ဘာရဲ့ အစစ် အမှန်နေရာများ ဖြစ်တဲ့ ဘိုးလင်းကွင်းများ၊ ကော်ဖီဆိုင်များနဲ့ ဘား များတွင် တွေ့ဆုံနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက် ပေးတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Meetup သာမရှိပါက ထိုသို့ အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေများဖြစ်မှုကို ပြင်ပကမ္ဘာအထိ ဆွဲဆန့် နိုင်ခြင်းမျိုး ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ Meetup က ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ ဝါသနာတူအုပ်စုမျာသည်လည်း ပရက်စလေ ချစ်သူ များကအစ ဘုရားမဲ့ ဝါဒီများအလယ်၊ ယိုယိုဝါသနာရှင်များ အဆုံး အမျိုးစုံလင်လှပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို စံချိန်မီ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုကဲ့သို့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်ဖြင့် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်း ထားပြီး အခမဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 8:47 AM
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ပြည်ပသို့ထွက်ခွာ၍ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေလိုသူများ ပြည်တွင်းရှိ အဆင့်မြင့် အလုပ်အကိုင် များကို ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများ အတွက် မရှိမဖြစ် ဖြတ်သန်းရမည့် အင်တာဗျူးအဆင့် အတွက် အလွန် အဖိုးတန်သော အကြံဥာဏ်များ ပေးနေသော ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်တယ်။ အင်တာဗျူးမဖြေခင် ကြိုင်တင် ပြင်ဆင်ပုံများ၊ အင်တာဗျူးဖြေမည့်နေ့၊ အင်တာဗျူး မေးခွန်းများကို ကိုင်တွယ်တုံ့ပြန်ပုံ၊ အင်တာဗျူး ဖြေအပြီး စသည်ဖြင့် တစ်ဆင့်ခြင်းစီအလိုက် အသေးစိတ် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖော်ပြပေးထားတယ်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမျိုးအစားအလိုက် လေ့ကျင့်ထားသင့်တဲ့ နမူနာ အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ နဲ့ စံပြအဖြေများ ကိုလည်း စုဆောင်းပေးထားပါတယ်။ CV Form နဲ့ Application Letter များအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 8:32 AM
ခရီးသည် တွေ့ပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဆိုင်က ကျွန်တော့်ကို လည်စီးမပါလို့ဆိုပြီး ပေးမ၀င်ဘူးဗျ . . ။
Posted by Welcome at 2:12 PM
အလှကုန်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ ကြော်ငြာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေအလှ၊ မျက်နှာအလှအပ၊ ဆံပင် အလှကုန်တွေ ထုတ်ကုန်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ပါဝင်တယ်။ အမျိုးသမီးအလှကုန်တွေသာမက အမျိုးသား တွေအတွက် အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ အလှကုန်တွေ ပါဝင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို အင်တာနက် ပေါ်မှာ ကြော်ငြာတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကတည်းကဖြစ်တယ်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ အွန်လိုင်းကနေ မှာယူနိုင်သလို အီးမေးလ်ပို့ပြီးလည်း အကြံဥာဏ်တောင်းနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းအချက် အလက်တွေကိုလည်း ရယူနိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်တယ်။ သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ အလှကုန်တွေမှာ ကိုယ်အရေပြား ကိုထိခိုက်စေမယ့် ဓာတုဆေးဝါးတွေ မပါဝင်ကြောင်း နဲ့ မျက်စေ့အလှကုန်တွေကိုတော့ ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင် စစ်ဆေးချက် ပါရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နမူနာဆေးဗူး၊ ဈေးနှုန်း၊ ပါဝင်တဲ့ အလေးချိန် ၊ စွမ်းဆောင်ရည် အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 2:09 PM
နာမည်ကျော်စာရေးဆရာ၊ ပြဇာတ်ရေးဆရာကြီး ဘတ်နတ်ရှော် က တစ်ခါတုန်းက အခုလို ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ “ အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန်တို့ဟာ ဘုံ ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းနဲ့ ခွဲခြားခံရတဲ့ နိုင်ငံနှစ်ခုပဲ ” တဲ့။ လန်ဒန်မြောက် အောက်ရထားဘူတာရုံထဲရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်တစ်ယောက်ဟာ Way out ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့ရင် ရင်ခုန်သွားနိုင်တယ်။ အမေရိကန်မှာ way out ဆိုတာ လက်ရှိဘဝကနေ ခေတ္တထွက်ပြေးပြီး တိမ်လွှာထဲ ပျံဝဲစေနိုင်မယ့် မူးယစ်နွယ်ဝင် ဆေးဝါးတွေကို ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လန်ဒန်မှာတော့ ရိုးရိုးထွက်ပေါက် တစ်ခုကိုညွှန်ထားတာပဲ ဖြစ်တယ်။ အခု ဖော်ပြထားတဲ့ ဘလောဂ့်လေးဟာ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာ ကွာခြားမှုတွေ အကြောင်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ပင်လယ်ကမ်းခြေဆီ မကြာခဏသွားရောက်ပြီး လှိုင်းစီးသူတွေအတွက် အဓိကရည်ရွယ် လွှင့်တင်ထားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ လှိုင်းစီးခြင်း ( Surfing ) နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိရှိထားသင့်တာတွေကို ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်တဲ့အပြင် အခြားသူများရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံများကိုလည်း ပါဝင် ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်း အများသူငါ တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယို clip တွေ၊ လှိုင်းစီးပြိုင်ပွဲများ (surfing contests) ၊ အမှတ်တရ အကြောင်းအရာများ စသဖြင့် ကဏ္ဍအလိုက် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တာဖြစ်ပြီး အခကြေးငွေပေးပြီး အသင်းဝင်ထားသူများ အတွက်လည်း လုပ်ဆောက်ချက် အစုံအလင်ပါရှိတဲ့ သီးသန့်ကဏ္ဍ တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ၄င်းပြင် လှိုင်းစီးခြင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းကိရိယာများကိုလည်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပင်လယ်လှိုင်းစီးလိုသူများ မဖြစ်မနေ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာသင့်တဲ့ အပန်းဖြေစရာ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 8:43 AM
အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုယ်သွားလည်ချင်တဲ့ အိမ်လေး ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို ရင်ထဲကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဝင်နှုတ်ဆက်ရုံလေးဆိုရင် ဒီလိုလေး ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒီမှာ မှော်သော့ ရှိတယ်။ ဒီမှော်သော့ လေးကို ကိုညီလင်းဆက် ဆီတစ်ဆင့် ယူဆောင်ထားပါတယ်။ အားလုံးကို လေးစားလျက်ပါ။
(မ) ကအမြဲတမ်း နှစ်သိမ့်အားပေးတယ်။
(မ) က အမြဲတမ်း ကူညီပေးခဲ့တယ်။
(မ) က အမြဲတမ်း အဖော်ပြုပေးတယ်။
(မ) ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အရာရာ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့သူပါ
ညတိုင်း ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ပြီး
ကျွန်တော့်ရဲ့ လမ်းပြကြယ်ကို ရှာနေမိတယ်
လမ်းပြကြယ် တစ်ဖြစ်လဲ (မ) ရယ်
(မ)ကို လိုအပ်နေလို့ပါ … (မ) ရယ် .. ။
( တိုက်ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ခွင့်လွတ်ဖို့ ကြိုတင်တောင်းဆိုပါတယ် ။ ။ )
ကင်ဆာရောဂါပြန့်ပွားမှုကို တန့်သွားစေသောဆေးသစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
Cannabis မှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဟာ ကင်ဆာဆဲလ်များ ပြန့်ပွားခြင်းကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းနည်းနဲ့ ထိရောက်စွာ ဟန့်တားထားနိုင်ကြောင်း အမေရိကန် သုတေသီတွေ တွေ့ရှိထားသည်။ California Pacific Medical Centre Research Institute မှ သုတေသီများ၏တွေ့ရှိချက်များအရ Cannabidol (သို့မဟုတ်) CBD ဓာတ်ပစ္စည်းသည် အဆိပ်အတောက်မဲ့ (Non Toxic)ဆေးအနေဖြင့် လက်ရှိ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသော ကင်ဆာဆေးကုသမှု Chemotherapy အား အစားထိုးနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြသည်။ Cannabis နှင့် CBD မတူညီချက်မှာ CBD တွင် Cannabis ကဲ့သို့ စိတ်ကြွစေသည့် စွမ်းအင်မပါရှိသည့်အတွက် သုံးစွဲရာတွင် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာမရောက်ကြောင်း Molecular Cancer Therapeutic Reports များ၌ ဆိုကြသည်။ CBD ၏ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ ကင်ဆာဆဲလ်များ ပြန့်ပွားရန်လိုအပ်သော Gene ဖြစ်သည့် Id-1 Gene ၏ အလုပ်လုပ်ပုံအား ဟန့်တား စေနိုင်ကြောင်း ဆိုကြသည်။ ပြီးခဲ့သော စမ်းသပ်ချက်များအရ CBD သည် ဆိုးရွားသော Brain Cancer ကိုပင် ဟန့်တားနိုင်ကြောင်း ဆိုကြသည်။ နောက်ပိုင်း စမ်းသပ်ချက်များအရ CBD သည် ရင်သားကင်ဆာအတွက် လည်း ထိရောက်မှု ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
အွန်လိုင်းပေါ်ရှိ ကဗျာဝက်ဘ်ဆိုက်များအနက် အကြီးဆုံးဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နာမည်ကျော် ကဗျာဆရာများရဲ့ ကဗျာတွေကို စုစည်းထားရုံမျှမက သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ကဗျာဆရာတစ်ယောက် အဖြစ် ကဗျာများကို ပေးပို့နိုင်တယ်။ သင့်အနေနှင့် လစဉ်ကျင်းပသော ကဗျာပြိုင်ပွဲများသို့လည်း ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကဗျာဆုကို ရပါက ဆုကြေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်း ဆွတ်ခူးနိုင်တယ်။ ကဗျာများကို အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့ရပြီး နှစ်လအတွင်း ဝက်ဘက်ဆိုက်ပေါ်၌ ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ တင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ မိမိ၏ကဗျာများကိုလည်း ပြန်လည် တည်းဖြတ်ပြင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် နေ့စဉ်အကောင်းဆုံးကဗျာ အဖြစ် တင်ဆက်ပေးသော ကဏ္ဍတစ်ခုရှိတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ပေါ်ထွက်ခဲ့သော ကဗျာများထဲမှ အကောင်းဆုံး ကဗျာတစ်ရာပုဒ်ကို ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ မူနဲ့ ရွေးချယ်ပြီး ဖော်ပြပေးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုလည်းရှိတယ်။ အချစ်ကဗျာများချည်း သက်သက် စုစည်းပေးထားသော ကဏ္ဍလည်းရှိပါတယ်။ ကဗျာဝါသနာရှင်များအတွက် ကဗျာစပ်သည့် နည်းစနစ် အမျိုးမျိုးကိုလည်း ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်တယ်။ မိမိကိုယ်ပိုက် ကဗျာစာအုပ်ထုတ်ပေး လိုသူများ အတွက်လည်း အကြံပေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် member အဖြစ် အဖွဲ့ဝင်ပါကလည်း သီးခြားအခွင့်အရေးများ ရရှိဦးမည် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂ်ဂါ သူငယ်ချင်းတွေထဲက ကဗျာဆုကြေး ကောင်းကောင်းရဖို့ အတွက် ကဗျာတွေပေးပို့ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
Posted by Welcome at 12:08 PM
လူငယ်များအနေနှင့် ဂုဏ်ရည်များနှင့်ပြည့်စုံပြီး လူမွန် လူချွန် လူကောင်း လူတော် များဖြစ်အောင် လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရန် ဖော်ပြအပ်ပါတယ်
(၁) သေချာတိကျခြင်း ( Accuracy )
(၂) လိုက်လျောညီထွေကျင့်ခြင်း ( Adaptability )
(၃) စွန့်စားစိတ်ရှိခြင်း ( Adventure )
(၄) နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ခြင်း (Agreeableness )
(၅) တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိခြင်း ( Ami-biting )
(၆) အကောင်းအမြတ်ကို သိမြင်ခြင်း (Appreciation of the Beautiful )
(၇) သတိရှိခြင်း ( Caution )
(၈) ကြည်လင်ရွှင်ပြခြင်း ( Cheerfulness )
(၉) သန့်ပြန့်စင်ကြယ်ခြင်း ( Cleanliness )
(၁၀) စွဲမြဲစူးစိုက်ခြင်း (Concentration )
(၁၁) ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း ( Contentment )
(၁၂) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ( Cooperation )
(၁၃) ရဲရင့်သတ္တိရှိခြင်း ( Courage )
(၁၄) ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်း ( Courtesy )
(၁၅) သိချင်တတ်ချင်စိတ်ရှိခြင်း ( Curiosity )
(၁၆) စိတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ( Decision )
(၁၇) ၀တ္တရားကျေခြင်း ( Duty )
(၁၈) ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း ( Effort )
(၁၉) ယုံကြည်မှုရှိခြင်း ( Faith )
(၂၀) မိတ်ဖွဲ့စိတ်ရှိခြင်း ( Friendliness )
(၂၁) ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း ( Generosity )
(၂၂) ကျေးဇူးသိခြင်း ( Gratitude )
(၂၃) ပျော်ရွှင်ခြင်း ( Happiness )
(၂၄) ကူညီရိုင်းပင်းခြင်း ( Helpfulness )
(၂၅) ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း ( Accuracy )
(၂၆) နိမ့်ချစိတ်ရှိခြင်း ( Humility )
(၂၇) ရယ်ရွှင်မှုနားလည်ခြင်း ( Humor )
(၂၈) ဥာဏ်ကွန့်မြူးခြင်း ( Imagination )
(၂၉) လုံ့လ၀ီရိယကြီးခြင်း ( Industry )
(၃၀) တရားမျှတခြင်း ( Justice )
(၃၁) သနားကြင်နာခြင်း ( Kindness )
(၃၂) ခေါင်းဆောင်ခြင်း ( Leadership )
(၃၃) ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်း ( Love )
(၃၄) သစ္စာစောင့်ထိန်းခြင်း ( Loyalty )
(၃၅) ဆုံးမနာယူခြင်း ( Obedience )
(၃၆) စနစ်စည်းကမ်းရှိခြင်း ( Orderliness )
(၃၇) သည်းညည်းခံခြင်း ( Patience )
(၃၈) ဇွဲကောင်းခြင်း ( Perseverance )
(၃၉) အချိန်မှန်ခြင်း ( Punctuality )
(၄၀) ကြံရည်ဖန်ရည်ရှိခြင်း ( Resourcefulness )
(၄၁) ကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်ခြင်း ( Self-reliance )
(၄၂) မြဲမြံခိုင်ခံ့သောစိတ်ရှိခြင်း ( Steadfastness )
(၄၃) ကောင်းဆိုးပိုင်းခြားနိုင်ခြင်း ( Tact )
(၄၄) ခြိုးခြံချွေတာခြင်း ( Thrift )
(၄၅) ခွင့်လွှတ်ခြင်း ( Tolerance )
(၄၆) ပညာဥာဏ်ရှိခြင်း ( Wisdom ) ။ ။
Posted by Welcome at 8:07 AM
ဤ၀က်ဘ်ဆိုက်သည် ရယ်ရွှယ်ဖွယ် ရုပ်ရှင်ကားများ၊ ဗီဒီယိုကားတိုများ၊ flash များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ စာသားဇာတ်ကား များ စတဲ့ အကြောင်းအရာ စုံလင်နိုင်သမျှ စုံလင်အောင် တင်ဆက်ထားတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် flash ပုံကလေးများနဲ့ e-Greeting Card များကိုလည်း ရယ်ရွှင်ဖွယ် နှုတ်ဆက်သ၀ဏ်လွှာ များနဲ့ မိတ်ဆက်သူငယ်ချင်းများထံသို့ ပေးပို့ပေးတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ ဟာသတွေနဲ့ ရုပ်ပုံကာတွန်းတွေမှာ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းမှု မပါအောင် သန့်စင် တည်းဖြတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင် ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ထည့်သွင်းပေးထားသော flash game များမှာလည်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယလူ = အင်း ငါ့မိန်းမက လေးဖက်ထောက်ပြီး ရှင် အခုချက်ချင်း အဲ့ဒီကုတင်အောက်က ထွက်ခဲ့၊ ယောက်ျားပီပီ သတ္တိရှိရှိ ကျုပ်ကို ရင်ဆိုင်စမ်းပါတဲ့ ... ...... ဟီး ဟီး …။
ပထမလူ = ဟိုက် - သေလိုက်ပါတော့ကွာ …… ။
Posted by Welcome at 7:33 AM
ချာလီ = ခင်ဗျားတို့လမ်းထိပ် စတိုးဆိုင်က အမျိုးသမီးများ တော်တော်အမြင်ကတ်ဖို့ ကောင်းတယ်ဗျ။ စကားပြော တာကလည်း မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ လွန်ပါရော။ အနေအထိုင် အပြောအဆိုကလည်း အောက်တန်းကျတယ်ဗျာ…။
ဒေးဗစ် = ဟာ ….. အဲဒါ ကျွန်တော့်ဇနီးဗျ ..
ချာလီ = (အလွန်အားနာသွားဟန်ဖြင့်) ကျွန်တော်ပြောတာက အဲဒီအမျိုးသမီး မဟုတ်ဘူးဗျ၊ သူ့အနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးလေးပါ …
ဒေးဗစ် = အဲဒါက ကျွန်တော့် သမီးအကြီးဗျ … ဟူ၏။
Posted by Welcome at 7:31 AM
ကောင်လေး = ကိုယ့်ကိုချစ်လားဟင်….
ကောင်မလေး = ချစ်တာပေါ့။
ကောင်လေး = ဘယ်လောက်ချစ်လဲ …. ?
ကောင်မလေး = အရင်လူတွေထက် ပိုချစ်တယ်။
Posted by Welcome at 7:30 AM
ဗဟုသုတတွေ တစ်လှေကြီး ရရှိနိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက် (ဒါမှမဟုတ်) ကိုးကား ဖော်ပြချက် တွေဟာ မှတ်သားစရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်မြင်လျှင် ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် အခန်းကဏ္ဍတွေကို အမျိုးမျိုးခွဲခြား ပြီးတော့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ပညာရှိတွေ အကြော်အမော် ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ စကားတွေ၊ မှတ်ချက်တွေ ကိုလည်း လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ သူတို့ခေတ်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ လူမှုဘ၀ ရှင်သန် ရပ်တည်ပုံ တွေကို ယှဉ်တွဲ လေ့လာနိုင်ပြီး ဘဝ အသိအမြင်တွေ အတွေးအခေါ် အမြင်သစ်တွေ တိုးပွား ရရှိနိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 7:25 AM
NBC ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ခွဲတစ်ခု ဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ အမျိုးသမီးများ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်အောင် ဖန်တီး ထားတဲ့ မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ အမျိုးသမီး သန်း ၂ဝ လောက်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကလေးပြုစု စောင့်ရှောက်ရေး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကျန်းမာရေး၊ အလှအပနဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား၊ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ အစာအဟာရနဲ့ ဖျော်ဖြေရေး ကဏ္ဍများအားလုံးကို ဖော်ပြပေးထား ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွင်း message board ကဲ့သို့ social networking tool များ အများအပြား ထည့်သွင်းပေးထား၍ အသုံးပြုသူ အမျိုးသမီးများ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အကြံဥာဏ်များပေးခြင်း တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ iVillage UK, iVillage Total Health နဲ့ Astrology.com, GardenWeb, gURL.com စတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မျာကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် အတွင်း ဗီဒီယိုများ၊ Blog များနဲ့ news links များလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ညီအစ်မများ အချိန်ရရင် တစ်ချက်လောက် ကလစ်လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။
ချစ်သူမျက်နှာ ၊ လပမာသို့
စိတ်မှာစွဲထင် ၊ ပျော်မြူးရွှင်၏။
ချစ်သူအပြုံး ၊ ကြယ်တစ်လုံးသို့
သီကုံးပန်းသွင် ၊ ချမ်းမြေ့ရွှင်၏။
ချစ်သူ့ရယ်ဟန် ၊ ဆည်းလည်းသံသို့
သံစဉ်ချိုမြ ၊ နားဝင်လှ၏။
ချစ်သူဘဝင် ၊ ပြုံးပျော်ရွှင်သော်
ကိုယ်လျှင်ကြည်နူး ၊ အသွင်ကူး၏။
အပြုံးကွယ်ပျောက် ၊ သူစိတ်ကောက်သော်
စိတ်နောက်ကိုယ်နွမ်း ၊ မရွှင်လန်းခဲ့။
လောကကမ္ဘာ ၊ လှရာရာတွင်
မာယာကင်းရှင်း ၊ ပြုံးပျော်ခြင်းနှင့်
ရင်တွင်းရွှင်ပျော် ၊ စိတ်ထားတော်သည့်
ကြင်ဖော်အပြုံး ၊ အလှဆုံးဖြစ်။
အလှဆုံးအပြုံး ၊ သက်ထက်ဆုံးတိုင်
အမုန်းဝေးကွာ ၊ လှမျက်နှာဖြင့်
နေလာအခိုက် ၊ ကြင်နာလိုက်ကြ
ထွေးပိုက်ပျော်ရွှင် ၊ ထာဝစဉ် ။ ။
Posted by Welcome at 7:54 AM
တစ်နေရာမဟုတ် တစ်နေရာမှာ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေ၊ သွေးထွက်သံယို မှုတွေ အမြဲဖြစ်နေတဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ သင့်အားလပ်ရပ် အပန်းဖြေခရီးစဉ်ကို လုံခြုံစိတ်ချရမှု အပြည့်ရှိအောင် ဘယ်လိုရွေးချယ်ရေးဆွဲမလဲ။ ဟိုတယ် ဘွတ်ကင်လုပ်တာတွေ၊ တိုးရစ်လမ်းညွှန် စာအုပ်ကိုဖတ်တာ နောက်ဆုံး အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ အချစ်တော် ကြောင်ကလေး၊ ခွေးကလေးတွေကို အစာကျွေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာ စတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ လုံလောက်ပြီလား။ တကယ်တော့ ပြီးပြည့်စုံပြီး အစွန်းအထင်းကင်းတဲ့ အပန်းဖြေခရီးစဉ် ဖြစ်ဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာ အရေးကြီးဆုံး အချက် တစ်ချက်ကျန်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေသွားလည်မယ့် ဒေသအပါအ၀င် အနီးအနား ဒေသတွေနဲ့ ကျန်တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေ ကျရောက်နေတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပေးတဲ့ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှု၊ အခြား သံသယဖြစ်ဖွယ် ဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စတွေကို အဓိက ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ မြေပုံနဲ့ ဖော်ပြပေးတဲ့ အတွက် အချိန်အလိုက်၊ နေရာဒေသအလိုက်နဲ့ ဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံကို ဖော်ပြထားတာမို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြတ်သန်းသွားလာ ကြမယ့်သူများအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 7:29 AM
ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်နဲ့ အမောင်ဘယ်သူလဲ၊
ဆောင့်ကြွ ဆောင့်ကြွပေါ့ မာန ဆိုဟန်ရုပ် ကျွန်ုပ်ပါပဲ။
ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်နဲ့ နောက်တစ်ကောင် ဘယ်သူလဲကွ၊
ဟုန်းဟုန်းထ ရုန်းရုန်းကြွတဲ့ ဒေါသ ဆို လူတိုင်းမုန်း လူပုန်းကြီးဗျ။
ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်နဲ့ လှောင်သလို ဘယ်သူလဲဖြေ၊
မရမက ခဏခဏလိုချင်တဲ့ အပျိုစင်ကျွန်မ လောဘ ပါရှင်ရေ … ။
မင်းတို့သုံးဦး ဝေးဝေးမှာရပ် ငါ့နားမကပ်ကြနဲ့၊
ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရဲ့ အထူး
အနုပညာ ကမ်းနဖူးမှာ ကဗျာရူး စာရူးဘဝနဲ့
ပန်းခူးကျန်ခဲ့ . . . . တဲ့ ။ ။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူ မြန်မာကျောင်းသားများ လေ့လာသင့်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ၂၀၀၆ ကတည်းက အင်တာနက်ပေါ် တင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကို မြန်မာ Version ဖြင့် Smart Resources Co., Ltd မှ လွှင့်တင်ပေးထာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်လိုတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားများ သိရှိထားမဲ့ အချက်များ၊ မိမိ အေးဂျင့်များကို ကြိုတင် မေးမြန်းစုံစမ်းထားသင့်သော အချက်များ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ အစိုးရကျောင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ၏ လက်ရှိအခြေအနေ၊ ကုန်ကျနိုင်မည့် ပညာသင်စရိတ်၊ နေထိုင်မှုစရိတ်များ၊ ခရီးသွားလာမှုစရိတ်များ ကိုလည်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်သာမက စင်ကာပူ ဒေါ်လာဖြင့်ပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ ကျောင်းတိုင်းရဲ့ ၀င်ခွင့်လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ ဖော်ပြထားပါတယ်။ IELTS စာမေးပွဲ ဖြေမဲ့သူတွေ reading ပိုင်းကို လေ့ကျင့်နိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ပေးထားတယ်။ နောက်ပိုင်း အွန်လိုင်းစာမေးပွဲကို အခမဲ့ လေ့ကျင့်ဖြေဆိုလို့ရတဲ့ တွေနဲ့လည်း လင့်ခ်ပေးထားတယ်။
Posted by Welcome at 9:31 AM
ပဋိသန္ဓေတားဆေးလုံးများသည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို များစေသည် ဆိုသော်လည်း သောက်သုံးခြင်းကို ရပ်လိုက်လျှင် ရပ်လိုက်ချင်း ၄င်းကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ကျဆင်းသွားကြောင်း Oxford မှ သုတေသီများက ဆိုကြသည်။
Lancet လေ့လာမှုအရ အမျိုးသမီးပေါင်း (၅၂၀၀၀)ဦးသည် ပဋိသန္ဓေတားဆေးများ သုံးစွဲသည့် အချိန်ကာလ ကြာမြင့်လေလေ ကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်တက်လေလေ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင် တားဆေး မသုံးစွဲသူများတွင် ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ အမျိုးသမီး(၁၀၀၀)တွင် (၃.၈)ဦးရှိပြီး၊ တားဆေး (၅)နှစ် သုံးစွဲပြီးသူများမှာ (၁၀၀၀)ဦးမှာ (၄)ဦးရှိပြီး၊ (၁၀)နှစ် သုံးစွဲပြီးသူများတွင် (၁၀၀၀)ဦးတွင် (၄.၅)ဦးရှိကြောင်း ဆိုကြသည်။
(သတိပြု ဆင်ခြင်နိုင်ရန် ထပ်ဆင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်)
ကမ္ဘာအနှံ့ ဖက်စ်ဆာဗာပေါင်းများစွာရှိသော tpc network ၏ လက်အောက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တယ်။ မိခင် အဖွဲ့အစည်း tpc မှာ ကြော်ငြာဝင်ငွေသက်သက်ဖြင့် ရပ်တည်သော အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့် အင်တာနက် နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သူ့ကိုမဆို အခမဲ့ ဖက်စ်ပို့စေနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ Fax Machine မရှိဘဲ အခမဲ့ဖက်စ်ပို့နိုင်သည် ဟူသောအချက်က လူများစွာကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပြီး ကြော်ငြာစပွန်ဆာ များလည်း အလုံးအရင်းနှင့် ရရှိခဲ့သည်။ ဖက်စ်တစ်စောင်ပို့ချိန် ပျမ်းမျှအနည်းငယ်ခန့် ကြာလေ့ရှိသော်လည်း Local Server ၏ Fax Traffic ပေါ်မူတည်၍ ထို့ထက်လည်း ပိုကြာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဖက်စ် ကို သက်ဆိုင်သူထံသို့ ရောက်သွားကြောင်းကိုလည်း အီးမေးလ်ဖြင့် confirm လုပ်ပေးဦးမည်ဖြစ်တယ်။ ထိုဖက်စ်ကိုလက်ခံ ရရှိသူသည် ကြော်ငြာနှင့်ပေးပို့သူ၊ လက်ခံသူတို့၏ လိပ်စာများ ပါဝင်သော စာရွက်နှင့် အုပ်ထားသည့် ဖက်စ်စာကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဝန်ဆောင်မှုသုံးရန် အတွက် Member ၀င်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ကမ္ဘာအနှံ့ ကိုတစ်ရက်လျှင် ဖက်စ်အစောင် သောင်းကျော် အခမဲ့ ပေးပို့လျက်ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် တော့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Posted by Welcome at 7:28 AM
ကိုယ်ခန္ဓာကို နေရောင်ခြည် ထိခြင်းအားဖြင့် ရရှိသော Vitamin သည် ဆဲလ်များ၊ တစ်ရှူးများ အိုမင်းပျက်စီးမှု Aging Process ကို နှေးကွေးသွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း ဆိုကြသည်။
King’s College ၏လေ့လာချက်များအရ သွေးထဲ၌ ဗီတာမင်ဒီ ပမာဏ ပိုများသောအမျိုးသမီး (၂၀၀၀)ကျော် ခန့်၏ DNA များတွင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ပြောင်းလဲမှုများသည် အခြားသူများနှင့်စာလျှင် နှေးကွေးနေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဗီတာမင်ဒီဓာတ်နည်းသော အစားအစာများနှင့် Multiple Sclerosis အဆစ်အမြစ်ရောင် (Rheumatoid Arthritis) ရောဂါများ ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းသည် ဆဲလ်များအတွင်းရှိ Telomere အမျှင်ကလေးများ တိုသွားခြင်းနိုင်ဆိုင်သည်။ ၄င်းအပြင် ဗီတာမင်ဒီအနေဖြင့် နှလုံးရောဂါနှင့် ကင်ဆာရောဂါများအတွက်လည်း အကျိုးရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
(စကားချပ်- Blog ညီအစ်မတို့ရေ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကင်းဝေးအောင် အချဉ်များများစားပြီး နေပူပူထဲ လျှောက်လည်ကြ တာပေါ့၊ ဒါမှ အမြဲနုပျိုနေမှာ)
Posted by Welcome at 10:11 AM
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့ နယူးယောက်ကာ မဂ္ဂဇင်းကြီးတွင် ဖော်ပြထားသော ကာတွန်းများကို အဓိကစုစည်း ဖော်ပြတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အနုပညာမြောက်တဲ့ မျက်နှာဖုံး စာအုပ်များကိုလည်း စုစည်းပေးထားတယ်။ ကာတွန်းများကို အကြောင်းအရာ အလိုက်၊ ကာတွန်းဆရာ အမည်အလိုက် အက္ခရာစဉ်နဲ့ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ကာတွန်း အသစ်များကိုလည်း သီးသန့်ကဏ္ဍ အဖြစ် စုစည်းထားပါတယ်။ နယူးယောက်ကာ ကာတွန်းများ အဓိကသိမ်းဆည်း ထားသည်ဟုဆိုသော်လည်း အခြားမဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကာတွန်းများ၊ သရုပ်ဖော် ပန်းချီများ၊ လုံးချင်းကာတွန်း စာအုပ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကာတွန်း ကွက်များကို ပုံသပ်သပ်ဆွဲထည့်ပြီး မိမိက စာသား(caption) ၀င်ဖြည့်ရတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဂိမ်းများလည်း တွေ့ရမယ်ဖြစ်ပါ တယ်။ ကာတွန်းဖတ်သူများအတွက် သာမက ကာတွန်းပညာရှင်များ အတွက်ပါ သီးသန့်ကဏ္ဍ များပါဝင်၍ ကာတွန်းနဲ့ပတ်သက်လျှင် ပြည့်စုံ စုံလင်သော အွန်လိုင်းဘဏ္ဍာတိုက် ၀က်ဘ်ဆိုက်ကြီးဟု တင်စားနိုင်ပါတယ်။
ဟိုး … ရှေးရှေးတုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ အင်မတန်မှန်တဲ့ ဗေဒင်လက္ခဏာ ပုရောဟိတ်ကြီး တစ်ဦးထံမှာ သူ့ရဲ့ဇာတာကို တွက်စစ်ကြည့်သတဲ့။ ပုရောဟိတ်ကြီးက အသေအချာ ကြည့်ရှု တွက်ချက်ပြီး မင်းရဲ့ဇာတာဟာ အင်မတန်ထူးခြားလှတယ်၊ တစ်နေ့ကျရင် မင်းဟာ ဧကန်မုချ ထီးဖြူ ဆောင်းရလိမ့်မယ် လို့ ဆိုလိုက်တော့ အဲဒီလူလည်း အလွန်ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့။ အဲဒီခေတ်က ထီးဖြူဆိုတာ ဘုရင်များမှ ဆောင်းခွင့်ရတာကိုး။
ဒီလူဟာ ဗေဒင်တွက်ပြီး ပြန်လာတဲ့နေ့ကစလို့ ဘာအလုပ်မှမလုပ်တော့ဘဲ ထီးဖြူဆောင်းရမယ့် နေ့ကိုသာ မျှော်လင့်နေတော့တယ်။ ရှေးပုံဝတ္ထုတွေထဲကလို ဖုတ်သွင်းရထားကြီးဆိုက်လာ … သူ … ဘုရင်ဖြစ် … ထီးဖြူဆောင်း … ဆိုတာတွေကိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်နေတော့သတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ အချိန်တွေဟာ တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးလာပြီး ဘာမှမလုပ်ဘဲ စိတ်ကူးနဲ့သာ ရူးနေတဲ့သူဟာလည်း ငတ်ပြတ် ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ နာမကျန်းဖြစ်လာတော့တယ်။ တစ်နေ့တော့ သူဟာ ကျဲကျဲတောက်နေတဲ့ နေပူပြင်းပြင်းအောက် တုန်ချည့်ချည့်နဲ့ လျှောက်သွားနေရင်း အားအင်ကုန်ခန်းလာပြီး မြေပေါ်လဲကျသွားတော့တယ်။ သူ ပြန်မထနိုင်တော့ပါဘူး။
ဒီအချိန်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တိုင်းခန်းလှည့်လည်လာတဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့ကိုတွေ့သွားတယ်။ သေခါနီး အသက်ငင်နေတဲ့ သူ့ကို အလွန် သနားသွားပြီး သူ့ရဲ့ထီးတော်မိုးကို အဲဒီသနားစရာကောင်းတဲ့လူကို ထီးမိုးပေး လိုက်စမ်းပါ လို့ဆိုတော့ ထီးတော်မိုးလည်း ဘုရင့်အမိန့်အတိုင်း ထီးသွားမိုးပေးရတာပေါ့။ ထီးဖြူရဲ့အရိပ် သူ့အပေါ်ကျလာတဲ့ ခဏမှာပဲ အဲဒီလူဟာ သေဆုံးသွားခဲ့တော့တယ်။
(လူငယ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဥက္ကာမင်းဆက် ရေးသားထားတဲ့ စာစုလေးကို လူငယ်များ အယူမမှားရအောင် တစ်ဆင့်ကူးယူ ဖော်ပြအပ်ပါသည်)
Posted by Welcome at 1:02 PM
တို့များ မြန်မာ ရွှေမြန်မာ။
ချီတက်မှာ ညီလျက်သာ။ ။
Posted by Welcome at 8:52 AM
၁၉၇၉ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်သော Economic Packaging and Clean room Supplies သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုများကို နှစ်(၃၀)နီးပါး ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများ၊ လေယာဉ်ပျံများဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းပါဆယ် အရွယ်အစားမျိုးစုံကို အလျင်အမြန်ဆုံး ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်း ဖြန့်ဝေရေး အော်ဒါများနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ငွေပေးငွေယူ၊ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စရပ်များ အားလုံးကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ ပြီးပြတ်အောင် ၀န်ဆောင်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ ဒ့ါအပြင် ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ခေါ်ယူမှာကြားသော မည်သည့် ကုမ္ပဏီရုံးခန်းသို့မဆို သန့်ရှင်းရေး ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ အခြားရုံးအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို လာရောက် ဆောင်ရွက် ပို့ဆောင်ပေးသော ၀န်ဆောင်မှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Welcome at 8:50 AM
ရိုဘော့များအကြောင်း စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ ရိုဘော့တစ်ကောင်ကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ တည်ဆောက်ကြည့် လိုသူများနှင့် အချင်းချင်း တွေ့ဆုံအမြင် ဖလှယ်လိုသည့် ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းမှ ရိုဘော့ဝါသနာရှင် များအတွက် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံး ကွန်းထောက်စခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှ ထိပ်တန်း ရိုဘော့ပညာရှင်များ ပါဝင်သဖြင့် ရိုဘော့နယ်ပယ်မှ နောက်ဆုံးပေါ် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ နှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်း သစ်များ တင်ပြထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို အလွန်ရိုးရှင်းသော အသွင်အပြင်ဖြင့် ကရပ်ဖစ်ကို တတ်နိုင်သမျှနည်းအောင် ရေးဆွဲဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထို့ပြင် ရိုဘော့ချစ်သူ အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုလိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးထား၍ Blog ဆိုက်တစ်ခုနှင့် ပိုတူနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်သို့ တိုးတက်ကြောင်း အကြံဥာဏ်များကို e-Mail ဖြင့်ပေးပို့ပေးပါက အထူး ကျေးဇူးတင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကမ်းလှမ်းထားတယ်။